Amathuba emiSebenzi ePricewaterhouseCoopers (PWC) 2021 Uhlaziyo: Iindaba zeSikolo ngoku
Amathuba emiSebenzi ePricewaterhouseCoopers (PWC): I-PricewaterhouseCooper iqesha izikhundla zemisebenzi eliqela. Umgqatswa ofanelekileyo kufuneka abe nesiDanga seBachelor kwimisebenzi okanye kwimihlaba enxulumene noko.
PwC Inceda umbutho kunye nabantu ukuba benze ixabiso abalifunayo. Sinothungelwano lweefemu kumazwe ali-158 anabantu abangaphezulu kwe-180,000 abazimiseleyo ukuhambisa umgangatho kuQinisekiso, iRhafu kunye neenkonzo zeNgcebiso.
Isihloko somsebenzi: UMphathi oMkhulu woLawulo loMngcipheko wezezimali
Ukuthengisa, ukuphuhlisa kunye nokukhokela kweeprojekthi zabathengi kuLawulo lweNgozi yezeMali.
Ukwakha kunye nokugcina ubudlelwane obongeza ixabiso kubathengi.
Ukucebisa abathengi beenkonzo zethu zezezimali kwiimodeli zabo zengozi yemali, imigaqo-nkqubo kunye nolawulo.
Ukuxhasa abathengi ekuphunyezweni kweNkqubo-sikhokelo yoLawulo loMngcipheko ngokubanzi.
Ukuchonga amathuba oshishino abaxhasi abakhoyo kunye / okanye abanokubakho.
Ukuthatha inxaxheba kuphuhliso lweshishini nokwenza igalelo ekusebenziseni amathuba oshishino kwimpumelelo.
Ukuba negalelo ekwabelaneni ngolwazi kunye nophuhliso kwiqela lokubonisana nomngcipheko.
Ukubonelela ngegalelo kunye nokuqhutywa kwamanyathelo ophuhliso lobunkokeli bokucinga kumngcipheko wemali nakwimigaqo.
Ukuqinisekisa ukubekwa kweliso okusebenzayo kweeprojekhthi zolawulo lomngcipheko ezininzi kunye nexesha elimisiweyo lokunika ingxelo.
Ukuphuhlisa kunye nokuqinisekisa iimodeli ukuhlangabezana neenjongo zabaxhasi kunye nolindelo.
Ukuhambisa iiprojekthi kwiindawo ezahlukeneyo zolawulo lomngcipheko kunye nokongeza ixabiso kubathengi abatsha nabasele bekhona.
Sebenza njengengcali yemicimbi (SME), ucebisa kwaye uxhase abathengi beenkonzo zethu zezemali ngokubhekisele kulawulo lomngcipheko kunye nokuthotyelwa kolawulo.
Ukuthatha inxaxheba ngokukuko kwiinkomfa nakweminye imisitho ukuxhasa amalinge ophuhliso lweshishini kunye nokudibana nabantu abanokuba ngabathengi.
Ukulawula / ukongamela amaqela eeprojekthi, ukuchonga iimfuno zophuhliso ngaphakathi kwamaqela, nokwakha ubuchule ngokucebisa, ukuqeqesha nokudlulisa ulwazi.
Idigri elungileyo yaseYunivesithi ubuncinci beklasi yesibini ukwahlulwa okuphezulu.
I-Master's degree egqityiweyo, ngokukhethekileyo kwi-Econometrics, kwiMathematika okanye kwezinye iindawo zokufunda.
Isatifikethi esaziwayo sobuchwephesha esifana ne-FRM / PRM / CFA siya kuba sisibonelelo esongeziweyo.
Iminyaka esi-7 ukuya kweli-10 yamava omsebenzi afanelekileyo kwicandelo lolawulo lomngcipheko wemali kwishishini lokugcina imali okanye kwindawo yokubonisana nomngcipheko.
Kuya kufuneka unolwazi olunzulu lomxholo kwi-ALM, kwimakethi, kwiikhredithi kunye nolawulo lomngcipheko wokuhlawula amatyala.
Ubungcali kwi-Basel II / III & Solvency II ethathwe ikakhulu kwi-Basel II / Solvency II yamava okuphunyezwa kweprojekthi.
Itekhnoloji eyomeleleyo kunye nezakhono zokwakha zemodeli ezinolwazi olusebenzayo lolwazi lwezixhobo zeOfisi kaMicrosoft.
Ukugqwesa kunye nokubhala izakhono zonxibelelwano ngesiNgesi.
Inkqubo esebenzayo kunye neshishini, ngokudibeneyo nokuziphatha okunamandla kweqela.
Amandla okwakha ubudlelwane obomeleleyo, bexesha elide kunye nabafowunelwa abaphambili kubasebenzisi kwimigca yenkonzo kunye nokusebenza ngokusondeleyo nabaphathi beC-suite.
Amandla okuphucula izixhobo ngaphakathi PwC uthungelwano, nokusebenzisana namaqela esicwangciso-qhinga sokuphuhlisa nokumilisela izindululo ezitsha nezikhoyo kwimarike kwicandelo lethu leenkonzo.
Amandla okuphuhlisa abantu ngoqeqesho olusebenzayo kunye noqeqesho lwamalungu eqela.
Ukuba bhetyebhetye ukuxhasa ezinye iinkalo zenkonzo ezingaphaya kwemimandla yolwazi lwakho.
Ukuba ufuna sikuncede ngolwazi oluhlaziyiweyo ngexesha elifanelekileyo malunga namathuba eMisebenzi ePricewaterhouseCoopers (PWC) 2021.
Yintoni oyithathayo kumathuba oMsebenzi kwiPricewaterhouseCoopers (PWC) 2021? Ndiyakubongoza ukuba usebenzise le nto inye ithuba Ukwabelana nabanye ngolu lwazi sisebenzisa eyethu Facebook, Twitter, or Uphando+. iqhosha lokwabelana ngezantsi.
Khuphela iPricewaterhouseCoopers PWC Imibuzo edlulileyo kunye neempendulo
Isisombululo se-ByteWorks Technology Solutions Ukufunyanwa kwabasebenzi kuhlalutyo lweShishini 2020
TOWERPOLY Thumela UTME Imibuzo edlulileyo kunye neempendulo | Ukukhuphela mahala
I-African Alliance Insurance Plc yokuGaya iPortal 2020 | www.cxcityconomy.cn
FIKELA ukuFunwa kwabafundi abaphumeleleyo kwi-2017 | Fikelela kwisikhokelo sokufaka isicelo kunye nemfuneko
Ukuqeshwa kwakhona kweNtel Nigeria kuMphathi, ukuThengiswa kweeSME 2018 -Lagos
I-Denys Holland International Scholarship 2019 yaBafundi abaDala
tags: Amathuba emiSebenzi kwiNdawo yokuSebenza yamaZiko eCoopers, Amathuba oMsebenzi kwiPricewaterhouseCoopers (PWC), Amathuba emiSebenzi ePricewaterhouseCoopers (PWC) 2021, Amathuba emiSebenzi ePricewaterhouseCoopers (PWC) 2021 Portal, Amathuba oMsebenzi ePricewaterhouseCoopers (PWC) 2021 Uhlaziyo lwePortal, Amathuba oMsebenzi ePricewaterhouseCoopers (PWC) 2021 Uhlaziyo, Amathuba oMsebenzi kwiPricewaterhouseCoopers (PWC) Uhlaziyo, Amathuba emiSebenzi ePricewaterhouseCoopers (PWC) Uhlaziyo luka-2021, Amathuba emiSebenzi ePricewaterhouseCoopers 2021, Amathuba emiSebenzi ePricewaterhouseCoopers 2021 Portal, Amathuba oMsebenzi ePricewaterhouseCoopers 2021 Uhlaziyo lweePort, Amathuba oMsebenzi ePricewaterhouseCoopers 2021 Uhlaziyo, PricewaterhouseCoopers
« IPricewaterhouseCooper (PwC) Ukuqeshwa kwabaNcedisi kuLawulo lwaBaphumeleleyo ngo-2021
I-BLW Portal Staff www.blwstaffportal.org/auth/login/?refr=Lw== Uhlaziyo lwamva nje »